बिदेशबाट पैसा पठाउनेहरु आज मालामाल हुदै ! ह्वात्तै बढ्यो बिदेशी पैसाको भाउ - News20 Media
June 22, 2020 June 22, 2020 N20LeaveaComment on बिदेशबाट पैसा पठाउनेहरु आज मालामाल हुदै ! ह्वात्तै बढ्यो बिदेशी पैसाको भाउ
काठमाडौँ – सोमबार युके पाउण्डसहित केही देशको विनिमयदर घटेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय २१ रुपैयाँ ६० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय २२ रुपैयाँ २० पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै एक बहराईन दिनारको खरिददर ३ सय २२ रुपैयाँ ५१ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय २४ रुपैयाँ ११ पैसा तोकिएको छ ।
एक कतारी रियालको खरिददर ३३ रुपैयाँ ११ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ २८ तोकिएको छ । त्यस्तै कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ ३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर १० रुपैयाँ ८ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै आज एक यूरोपियन यूरोको खरिददर १ सय ३५ रुपैयाँ ९२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर १ सय ३६ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको छ। एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ५० रुपैयाँ २८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ५१ रुपैयाँ २ पैसा तोकिएको छ।
त्यस्तै एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ९४ रुपैयाँ ८८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ९६ रुपैयाँ ८३ पैसा तोकिएको छ । एक साउदी रियालको खरिददर ३२ रुपैयाँ ४२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ५८ पैसा तोकिएको छ । एक मलेसियन रिँगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ६४ पैसा तोकिएको छ ।
भारतलाई लगातार झट्का दिँदै चीनको पक्षमा पुग्यो इरान, भारत तनावमा